Ukuhlambalaza kungenye yezikhathi ezimbi futhi ezibuhlungu ngokuqondene nombhangqwana. Yilokho esikufundayo, ukuthi yini esiyesabayo, noma, abanye, siyithatha kalula, siyiphathe ngokuthula. Ukwehliswa kuhlanganisa nemiphumela ehlukahlukene, kodwa konke kuzoba kubi futhi kubi kumculi, futhi ngisho nangokwengeziwe kumlingani. Ukungathembeki kubulala ukuziqhenya kwethu, kusenza sibe nobuhlungu kakhulu futhi bubabaze, sihlupha amaphupho ethu namaphupho ethu, siphume ubuhlobo obuye bwakhiwa isikhathi eside ... Kodwa, naphezu kwayo yonke lemiphumela emibi, ukuhlubuka kwakukhona futhi kuqhubeka nokukhona, futhi ukuziphatha komuntu kuyaqhubeka kuyafana , njengakuqala. Isimo sengqondo sokushintsha kumuntu ngamunye sihlukile, kodwa futhi kwenzeka ukuthi sishintsha i-cardinal ngesikhathi esifushane. Isihloko esithi "Iseluleko sezengqondo: Ingabe udinga ukuvuma ukuhlukumezeka?" Uzokutshela ukuthi ochwepheshe bacabangani ngalesi simo sokuphila esibucayi.
Izizathu zenguquko zingase zihluke kakhulu. Ukungabikho noma ukuvutha othandweni, ukungabi nesidingo esithile noma ngisho nokuvumela imvume. Ukuzihlambalaza kwenziwa ngokuphindwe kabili njengesilisa wesilisa, kodwa ngesikhathi esifanayo, inani labesifazane abaguqula abalingani babo alikho nhlobo. Phakathi kwabesifazane, isizathu sokukhaphela ngokuvamile kuwukuntula kokuxhumana ngokomzwelo nangokwengqondo, ukukhathala okuvela esimweni sobuhlobo, izinkinga zokuzihlonipha kanye nobuhlobo nomyeni wakhe. Isizathu esifanayo sokukhawulwa kowesifazane singase siphindisele emndenini wakhe ngenxa yezinguquko "zangaphambili" ezedlule azenzile ngaphambili.
Iseluleko sochwepheshe wezengqondo: ngabe kuyadingeka yini ukuvuma ukuhlukunyezwa, ikakhulu kuxhomeke ebulili bomuntu ocele usizo. Ngokufanayo, bobabili abesifazane nabesilisa baqonda ngokuhlukumezeka. Kuyoba buhlungu nakakhulu ukuthi owesifazane athole ukuthi umyeni wakhe usondelene nomuntu futhi uthembela omunye owesifazane ngaphezu kwalokho akwenzayo. Ukuwa othandweni nomunye, ukummangaza - yilokho abesifazane besaba ngakho. Kubantu, inkohlakalo eningi kakhulu iyoba ngukuhlukumezeka, okuwukuthi ukusondelana kocansi, komzimba komunye nomunye. Kuye, umqondo kanye wokuthi umkakhe angathola i-orgasm evela komunye umuntu kakade unganakulinganiswa. Futhi, amadoda asabela ekukhapheni izifo eziningi kakhulu kunabesifazane, okufanele kucatshangelwe uma kuhlaziywa isimo, yini owesifazane okufanele ayenze.
Abantu abasaqhubeka nokuhlubuka banomuzwa wecala. Kukhona umbuzo, okwamanje awunayo impendulo eyodwa: ingabe kufanelekile ukuvuma ukuhlukunyezwa? Ezinye izazi zengqondo zihlukanisa impendulo yalo mbuzo kubantu nabesifazane. Bayeluleka amadoda ukuba avume ukuhlubuka, kepha ngokucophelela, baphenduke ngobuqotho ngalokho okwenzekile. Kwabesifazane, ezinye izazi zengqondo zincoma ukuthi zingavumelani ukukhashelwa, ngoba amathuba okuthethelela komyeni aphansi kakhulu, njengoba ukuhlukumezeka kuthinta kakhulu "I" lakhe futhi kuyiqiniso elihle kakhulu futhi elibuhlungu.
Kodwa noma kunjalo, imibono ihlukile, kepha cishe wonke umuntu uyavumelana nento eyodwa - okokuqala udinga ukuziphatha ngokuzenzekelayo ngengqondo. Zikhethele ukuthi yini ngempela eyakuphoqa ukuba ukhashe, okwakuyisizathu sokuthi uzizwa kanjani ngakho. Hlaziya okwenzekile, ziqonde wena nezenzo zakho ngaleso sikhathi, futhi lokhu kuhlaziywa kuzokusiza ukuxazulula inkinga.
Kungakhathaliseki ukuthi uyavuma ukuhlukumezeka futhi kuxhomeke ekubambeni kokukhwabanisa okukukhathazayo. Uma uthanda ngempela umyeni wakho, zizwe usizi ngalokho okwenzekile, futhi ube nomuzwa omkhulu wecala nokuzisola, kungenzeka ukuthi uthandeke ukutshela mayelana nokukhwabanisa kwakho ukuze unciphise umthwalo nokuhlukunyezwa kokuziphatha kwengqondo yakho. Kodwa lapha kuyadingeka ukuba ucabangele isici esisodwa esibaluleke kakhulu: ukuthi umyeni wakho uzosabela kanjani ngalokhu, ukuthi uzosabela kanjani, kwenzekani ngemuva kwalokho nokuthi kuzoba ngcono kanjani kuye.
Abanye bafuna ukuvuma ukuhlukumezeka, ngoba lokhu kuyisenzo esiphakeme kakhulu nesokuziphatha. Futhi bayaqiniseka ukuthi kufanele bathethelelwe ngaphandle kwehluleka futhi baqiniseke ngokufaneleka kwabo nokungenasono, ngoba basaphenduka kulokho abakwenzile. Leli cala liwukuxhaphaza futhi ezimweni eziningi kunqatshiwe.
Abanye bayavuma ukuhlubuka, bafeza impindiselo yabo. Noma bafuna ukuba umyeni abe nomhawu ngabo, baqale ukuwaqonda futhi, bezisole ngokuthi akabanikanga ukunakekelwa okwanele. Abanye besifazane ngale ndlela bazama ukubuyisela inzalo yomyeni noma ukumenza ahlupheke lapho ezwa ukuhlubuka, ngenxa yalokho: yilokho okwenzekayo uma ungamjabulisi umkakho. Kwakukhona futhi amacala lapho abesifazane behlambalaza ngenhloso yokuziphendulela, ukuze bazibonele ekuphenduleni okungalungile komyeni wabo, ukuhlola izinga lemicabango yabo. Yiqiniso, zonke lezi zimo zingacatshangwa ngokuphelele. Lokhu kungamacala uma ungafanele uvume ukuhlukumezeka futhi ushiye izifiso zakho, futhi ubuye ucabange ngesimo sakho sengqondo kumyeni wakho. Kuze kube manje angabhekwa njengomuntu oyithandayo, uma enye yalezi zimo ikufanele? Ingabe uyamethemba ngokweqile noma uyamthanda?
Uma ungasazi, kusadingeka ukuthi uvumele ukuvuma ukuhlukumezeka, cabangela izici ezinhle nezimbi zombili lezi zimo. Uma kwenzeka ukwesaba ukwamukela ukuhlukumezeka, kuhlale kulungile ukuthi ubuhlobo nomyeni wakho ngeke bushintshe nhlobo, uzoqhubeka ekubhekisisa ukuthi ungumfazi othembekile, oqotho futhi othandekayo. Bathi amanga amnandi angcono kuneqiniso elibi. Uzovikela umyeni wakho ekucindezelekeni, futhi kunamathuba aphezulu ukuthi akekho ozokwazi ngalesi sigameko, futhi ibala elimnyama lokukhaphela liyophela nesikhathi. Ngakolunye uhlangothi, ngezinye izikhathi, okufihliwe ngezinye izikhathi kuyacaca, futhi kungakhathaliseki ukuthi ufihla ukuphikisana, kuhlale kuyingozi ukuthi umyeni wakho azolwazi ngalokhu, futhi kuyoba ngcono uma ezwa kuwe ukuphenduka okuqotho kunokungathembeki othile oyomtshela enye, ukufaka noma ukuguqula imininingwane eminingi. Futhi, ungakhohlwa ngonembeza kanye nomuzwa wecala, okungenzeka kule ndaba kuhambisane nayo yonke impilo yakho.
Ukuqashelwa, kungakusiza, ukusiza abalingani bakho ngemizwa nezinkinga. I-plus yayo yukuthi ukhululekile ngempela ukuzisola, futhi lokhu kukhetho kufanelana nawe uma ucabanga ukuthi emndenini owesilisa nowesifazane akufanele babe nezimfihlo, futhi ubuhlobo kufanele bube buqotho futhi buhlanzekile. Kulesi simo, lokhu kukhetho kungokwakho. Kodwa kulokho kuncishisiwe: iqiniso lokungathengisa lingalimaza kakhulu indoda ngokwengqondo, futhi angeke ikuthethelele lokhu. Futhi, ukuthembela ebuhlotsheni bakho kuzoncishiswa; futhi isikhathi eside, ngisho noma ekuthethelela, kuzoba nzima.
Cabanga nje ngawe, kodwa mayelana nomlingani wakho, hlaziya isimo futhi ubikezele imiphumela yaso ehlukahlukene, ungayenza kanjani. Into eyinhloko, yiba neqiniso nawe futhi ungalaleli omunye umuntu ngaphandle kwengqondo yakho. Futhi-ke iseluleko somchwepheshe wengqondo: kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuvuma ukuhlukunyezwa, ngeke udinga.
Amalungelo abesifazane emndenini
Kungani sesaba ukwenza iphupho ligcwaliseke?
Ukusola. Indlela yokubhekana nayo
Ukugqoka kwakusihlwa: izimpahla ezintathu ezingezona zikazwelonke
Isaladi kusuka iklabishi nesithombo
Ijamu elimnandi kusuka ku-feijoa, iresiphi ngesithombe
Indaba ehlaziywa ngemfashini
Izindlela zokukhishwa iklabishi
U-Ksenia Sobchak weluleka ihhovisi likashushisi ukuthi libhekane nomphathi oneminyaka engu-55 ubudala waseLukoil
Ama-muffin nge-ayisikhilimu ayisikhilimu